Agaasimaha Guud ee wasaaradda arrimaha dibadda oo xilkii la wareegay | Somaliland.Org
Agaasimaha Guud ee wasaaradda arrimaha dibadda oo xilkii la wareegay
June 27, 2012	HARGEYSA (Somaliland.Org)-Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibada iyo iskaashiga caalamiga ah Md. Mawliid Maxamuud Ibraahim ayaa maanta xilkii u kala wareejiyey ku simahii Agaasimaha guud ee wasaaradaas Axmed Xuseen iyo agaasimaha guud ee cusub Faysal Cali Sheekh.
Agaasimaha Maamulka ee wasaaradda oo ahaa sii hayaha xilka Agaasimaha guud Md Axmed Xuseen oo ka hadlay xafladii xil wareejinta ayaa sheegay in wasaarada arrimaha dibadu tahay wasaarad balaadhan oo dalka dibadiisa ku leh wakiilo badan una taagan fulinta siyaasadda arrimaha dibada ee Qaranka.
Axmed Xuseen waxa kale oo uu xusay in wasaarada ay haystaan caqabado ay ka mid atahay xaaladda ictiraaf la’aaneed ee weli jirta taasoo shaqadeedii ka dhigtay mid culus.
Agaasimaha guud ee cusub ee wasaaradda Arrimaha dibadda Md. Faysal Cali Sheekh oo xafladaasi ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha dibadu u baahan tahay wada tashi dhex-mara waaxyaha iyo qaybaha wasaaradda talaabadaas oo uu ku tilmaamay mid ahmiyad u leh habsami u socodka hawlaha wasaaraddu u xilsaaran tahay.
Md faysal Cali Sheekh waxuu sheegay in wasaaradda uu la kulmay xilli xaasaasi ah oo Somaliland wadahadal masiirkeeda siyaasadeed ku saabsan ay la gelayso dalka aynu jaarka nahay ee Somalia.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Arrimaha dibada Mawliid Maxamuud Ibraahim oo madashaasi ka hadlay ayaa sheegay in mudadii uu joogay wasaaradda ay ku guulaysteen xidhiidhka wakiilada dibadda oo la joogtooyey.
Wasiir Ku xigeenku waxa uu intaasi ku daray in qorshaha sanadka ay ku jirto dhisme labo dabaq ah oo wasaaraddu leedahay oo ay hirgelin doonto hay’ada USAID.
Ugu dambayntii Wasiir ku xigeenka wasaaraddu waxuu si rasmi ah xilkii ugu kala wareejiyey labada mas’uul ee kala ah ku simahii Agaasimaha Guud iyo Agaasimaha guud ee Cusub ee wasaaradaasi dhowaan loo magacaabay.
Previous PostSLNTV oo xalay si toos ah u tabiyay munaasibaddii 26-ka June iyo Agaasime Dhuxul Oo ka hadlayNext Post‘Waxaan ka filaynaa kulanka labada madaxweyne natiijo u wanaagsan qadiyadda Somaliland’	Blog